Rabshado Kasocda Gobolka Tigrey & Khasaare Kadhashay. | ogaden24
Rabshado Kasocda Gobolka Tigrey & Khasaare Kadhashay.
Dec 11, 2017 - Aragtiyood
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Adgirat ee Gobolka Tigrey ayaa sheegaya rabshado aad uxoogan oo u dhaxeeya ardayda kala qoomiyadaha ah ee wada dhigata Jaamacada magaalada Adgirat.
Sida xogta aan kuhelayno ardayda udhalatay qoomiyada Tigreega ee wax kadhigata Jaamacada Adgirat ayaa weerar xoogan kuqaaday ardayda Axmaarada iyo Oromada ah ee wax kadhigata jaamacadaha Gobolka Tigrey gaar ahaan jaamacada magaalada Adgirat.
Warka ayaa intaas kudaraya in uu dagaal gacan kahadal ah dhex maray ardayda Tigreega ah ee weerarka ah iyo ardayda udhalatay qoomiyadaha kale ee difaaca ah, waxaana lasheegayaa in uu jiro khasaare aad ubadan oo soo kala gaadhay labada dhinac oo aan faahfaahin rasmi ah laga haynin.
Ardayda weerarka qaaday ee udhalatay qoomiyada Tigreega ayaa lasheegay in ay ku andacoonayaan in ardayda Tigreega ah ee wax kabarata Gobolada Axmaarada iyo Oromada lalaayo ama lasoo caydhiyo, waxayna sheegayaa in ay sidoo kale eryayaan ardayda qoomiyadaha kale ah.
Ciidamada amaanka ee wayaanaha oo goobta soo gaadhay ayaa lasheegayaa in ay ka quusteen in ay damiyaan rabshadaha Jaamacada kasocda, waxaana lasheegayaa in ay ardayda Tigreegu handadayaan ardayda martida ah ee qoomiyadaha kale.
Guud ahaan waxaa meel aad u hoosaysa maraya amaanka guud ee wadanka Itoobiya, waxaana xidhan dhamaan jaamacadihii Gobolka Oromia kuwaas oo intooda badan ay dhex dagan yihiin ciidamada wayaanuhu